सन् २०२१ मा नेपालका कति युवा दक्षिण काेरिया जान पाउँछन् भयाे कोटा निर्धारण - News 88 Post
April 12, 2021 N88LeaveaComment on सन् २०२१ मा नेपालका कति युवा दक्षिण काेरिया जान पाउँछन् भयाे कोटा निर्धारण
काठमाडाैं । दक्षिण कोरियाको मानव संशोधन विभाग (एचआरडी)ले सन् २०२१ मा नेपालका लागि पाँच हजार ४०० जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले एचआरडीले निर्धारण गरेको यो सङ्ख्या लग्ने सङ्ख्याभन्दा पनि भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्णका लागि निर्धारण गरेको हो । एचआरडीले सन् २०२१ का लागि ५२ हजार विदेश श्रमिक लैजाने गरी कोटा निर्धारण गरेकोमा नेपाललाई यो सङ्ख्या परेका हो । यो विश्वका विभिन्न १६ देशका लागि छुुट्याइएको कोटा हो ।
को’रो’ना’ले भाइको मृत्यु, सामाजिक सञ्जालमा दीदीको बेइज्यती किन हुँदैछ ?
हृदयविधारक घटना: यता आमाको लास चितामाथि, उता अस्पतालमा छोराको मृत्यु ! कति निठूरी छस् हे दैव